Ala mpempe akwụkwọ metal akụkụ ịgbado ọkụ ụlọ ọrụ na suppliers | Ouzhan
Ihe ndi mmadu eji eme ihe bu ihe ndi ozo bu: ígwè nchara, igwe nchara, tinplate, igwe mmiri, ọla kọpa na ọla kọpa, ihe magnesium alloy, alloy alloy aluminium oyi, efere ọkụ akpọrọ, efere kpaliri, efere electrolytic, efere aluminom, igwe anaghị agba nchara efere ọla kọpa. A na-ejikarị ọkụ ọkụ na ịgbado ọkụ gas, yana ịgbado ọkụ laser, brazing, ịgbado ọkụ ọkụ, ịgbado ọkụ elektrọn, ịgbado ọkụ mgbawa, wdg.
Uru nke akụkụ mpempe akwụkwọ na-ekpo ọkụ
- Zọpụta ihe ndị e ji ígwè rụọ ma belata ihe owuwu;
- Mee ka nhazi na ntinye uzo di nfe ma me ka oru oma meputa;
- High bughi ike na ezi nkwonkwo akara; nyekwuo mgbanwe maka nhazi nhazi;
- Usoro ịgbado ọkụ dị mfe ịhazi ma rụọ ọrụ.
Ouzhan OEM ahaziri mpempe akwụkwọ metal ịgbado ọkụ ọrụ-China Shanghai mpempe akwụkwọ metal ịgbado ọkụ akụkụ emeputa
Ouzhan bụ onye nrụpụta na - agbakwunye ụlọ ọrụ na azụmaahịa, na - enye ọrụ ndozi ntụgharị na igwe nhazi igwe. Anyị nwere ike hazie elu-nkenke mpempe akwụkwọ metal ịgbado ọkụ akụkụ na mụ na a pụrụ ịdabere na àgwà dị ka ndị ahịa chọrọ. A na-arụpụta akụkụ igwe ndị a site na iji akụrụngwa kachasị mma, nke a na-enweta site na ndị na-ebubata ngwa ahịa a ma ama. Anyị ike na ọkachamara oru otu na oru oma management na ime ihe na usoro nwere ike hụ na zuru okè n'ichepụta nke mpempe akwụkwọ metal ịgbado ọkụ igwe akụkụ. Tụkwasị na nke ahụ, ngwaahịa ndị na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe na-agbaso ụkpụrụ dị elu ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ dị iche iche. Na anyị nwere ike inye mpi ọrụ maka mpempe akwụkwọ metal ịgbado ọkụ na ịgbado ọkụ ngwaahịa na anyị kpọrọ ahịa.
Ngwa ebe nke mpempe akwụkwọ ịgbado ọkụ
Weldzọ ịgbado ọkụ dị iche iche dabara maka ihe dị iche iche:
Gas ịgbado ọkụ: obere carbon nchara, ike alloy ọla kọpa, wdg
Electrode aak ịgbado ọkụ: okpomọkụ na-eguzogide ígwè, red ọla kọpa, ike alloy, wdg
Mergbado ọkụ aakpo:
Carbon dioxide gas echebe ịgbado ọkụ: mkpa efere ịgbado ọkụ
Argon arc ịgbado ọkụ: titanium alloy, Al alloy, wdg
Plasma ịgbado ọkụ: ikuku ikuku, igbe ikike, wdg.
Electroslag ịgbado ọkụ: nnukwu nkedo-welded oké-walled mgbali arịa, wdg
Abụ ịgbado ọkụ: overlap nke mpempe akwụkwọ zọ akụkụ na cross Ogwe, wdg
Ntughari uzo: akụkụ nchara nchara
Nkọwapụta ịgbado ọkụ: T-yiri ịgbado ọkụ, anwụrụ ịgafe, wdg
Butt ịgbado ọkụ: rails, wdg
Mgbado ọkụ esemokwu: rotors, aka uwe, wdg.
Brazing: ígwè dị elu, akụkụ injin, wdg.
Gịnị bụ ojiji nke mpempe akwụkwọ ịgbado ọkụ akụkụ
Ebumnuche bụ isi nke ịgbado ọkụ bụ iji jikọọ obere ihe igwe na nnukwu (dịka eserese ma ọ bụ nha achọrọ), ma ọ bụ mee jiometrị achọrọ site na njikọ (ịgbado ọkụ). Eldgbado ọkụ, nke a makwaara dị ka ịgbado ọkụ ma ọ bụ ịgbado ọkụ, bụ usoro mmepụta na teknụzụ maka ijikọta ọla ma ọ bụ ihe ndị ọzọ thermoplastic dị ka plastik site na kpo oku, okpomọkụ dị elu ma ọ bụ nrụgide dị elu.
Uru nke Ouzhan mpempe akwụkwọ maka ịgbado ọkụ
- All nkenke mpempe akwụkwọ metal ịgbado ọkụ bụ n'okpuru nlezianya àgwà nnyocha.
- Dị ka Eserese ma ọ bụ n'omume maka kpọmkwem mpempe akwụkwọ metal ịgbado ọkụ n'ichepụta.
Nke gara aga: Omenala mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ
Osote: Ahaziri mpempe akwụkwọ metal ịgbado ọkụ akụkụ